October 2017 – Kalfadhi
Falanqeyn Warbaahinta & Dowladda
October 19, 2017 October 19, 2017 Kalfadhi
Dad ku dhow shan boqol oo qof oo Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar, wiil iyo waayeel, iyo carruur iyo cirroole ayaa hal maalin lagu xasuuqay aagga Soobbe. Shan maalin kaddib dhulkii oo dhan waa la nadiifiyay, oo xitaa dhibic dhiig ah in aan lagu arkin baa suurtogal ah. Dhallinyarrada mutadawiciinta ah ee howshaas qabtay waxa ay bulshada Soomaaliyeed ku leeyihiin abaal mug weyn. Laakiin haddii uu jiro qorshe ah in baaritaan lagu sameeyo qaraxaas, howshaas quruxda badan ee aan wanaagga kala jeednay waxa ay tirtirtay raad walba…
October 4, 2017 October 5, 2017 Kalfadhi
Ilaa iyo 3 kulan oo ay yeelan lahaayeen xildhibaannada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa koorom la’aan u baaqday labadii bil ee u dambeysay, waxaa sidoo kale jira kulamo sababo aan la faahfaahin loo baajiyay. Baarlamaanku wuxuu hadda ku jiraa kulamada kalfadhiga labaad oo furmay 8-dii Luulyo. Saddex kulan ee koorom la’aanta u baaqday ayaa kala ah mid dhici lahaa 2-kii Agoosto oo ay mudaneyaasha baarlamaanka su’aalo ku waydiin lahaayeen wasiirka dastuurka, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil. Kulan dhici lahaa 9-kii Sabteembar oo ay xildhibaannadu uga doodi lahaayeen nin lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuuse…
Sharciyo La Ansixiyay Warar
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Isniintii (2 Oct, 2017) saxiixay sharciga isgaarsiinta oo labada aqal ee baarlamaanka ay horay u ansixiyeen bishii Agoosto. Sharcigan dhaqangalkiisa waxay ku xiran tahay dhismaha hay’adda iyo isgaarsiinta. Halkan dhag sii si aad u akhrisato Sharciga Isgaarsiinta
Wax badan ka ogow Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya
October 3, 2017 October 5, 2017 Kalfadhi
Aqalka Sare waa mid ka kamid ah goleyaasha uu ka kooban yahay Baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya,waxa uuna leeyahay matalaad iyo masuuliyado sharci dejin oo isaga u gaar ah. Mudaneyaasha loo soo doorto aqalkan waxa loogu yeeraa Senataro waana aqal ku cusub Baarlamaanka. Mudaneyaasha Aqalka Sare ayaa ka kooban 54 xubnood oo laga soo doortay dhamaan dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka ah, halka xubnaha matalaya Somaliland lagu doortay Muqdisho, sababta ayaana ah Somaliland oo ku doodday inay ka go’day Soomaaliya. Qaab Dhismeedka Golaha Aqalka Sare Guddoomiye Ku xigeen 1…
Sharciga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka
Sadarkan dhag sii sii aad u akhrisato qodobbada sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka.
October 3, 2017 October 4, 2017 Kalfadhi
Halkan ka akhriso sharciga axsaabta siyaasadda dalka, si aad wax badan ugala socoto heerarka uu soo maray iyo qodobbada ku xusan.
October 3, 2017 October 3, 2017 Kalfadhi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay oo Isniin ahayd saxiixay sharciga isgaarsiinta ee bishii Agoosto ee sanadkan ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka, horayna ay u soo gudbisay xukuumadda. Madaxweynaha oo ka hadlay bandhig uu sharcigan ku saxiixayay oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay in caqabado badan oo ka dhashay burburka hay’adihii dowladda ay jiraan, kuwaas oo aan muddo kooban lagu xallin karin. Bandhiggan waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha aqalka sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ahna ku simaha guddoomiyaha Cabdiweli Ibraahim Sheekh…
Waxaa la ii keenay waraaq ka soo baxday degmada aan deggenahay sida waraaqda ku cad waxaa ku saxiixan gudoomiyaha degmada. Waraaqda waxaa ku qoran, in aan nadiifiyo gurigeyga bannaankiisa, weliba aan nal ku xiro, sidoo kale waxaa ku qoran amar ah in maalin kasta oo Khamiis ah aan ka qeybgalo nadaafadda xaafadda. Dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida heysata waxaa waaye in loo keeno qof aan dalka ama deegaanka xog-ogaal u aheyn, sidoo kale aanan kala garaneyn waxa shacabka laga rabo iyo waxa dowladda laga rabo. Bil kasta waxaan bixiyaa lacag…
October 2, 2017 January 31, 2018 Kalfadhi
Jamhuuriyaddu way liidatay; waxaa soo gaartay jug culus oo dhan walba ah; xorriyaddii kaddib ma soo marin waqti ay garab iyo hiil maaliyadeed uga baahneyd dalalka Carabta ee saliidda dhoofiya. Muddo ka yar sanad ayaa ka soo wareegatay dagaalkii 1977. Soomaaliya waxay xilligaas xubin ka ahayd Jaamacadda Carabta, oo waqtigaasi ay ka dhex taagneyd xasarad siyaasadeed. 17 dal oo Carab ah oo ka caraysan heshiiskii madaxweynihii Masar Anwar El Sadat oo uu Camp David kula saxiixday Israel ayaa ciqaab ku soo rogay Masar: 1- Waxay u jareen xiriirkii diblomaasiyadeed 2-…
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo mas’uuliyiin kula kulmay Qaahira
October 2, 2017 Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa Xoghayaha guud ee Ururka Jaamacadda Carabta kala hadlay sidii uu ururkaas u kordhin lahaa taageerada uu siiyo Soomaaliya. Labada mas’uul ayaa shalay ku kulmay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar oo uu mudane Jawaari ku joogo booqasho rasmi ah. Waxay sidoo kale ka wadahadleen sidii ay Jaamacadda Carabta uga caawin lahayd Soomaaliya dhameystirka dastuurka qabyada ah ee dalka, horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda. Dhinaca kale, guddoomiye Maxamed Jawaari ayaa dhiggiisa Masar, Ali Abdel Aal oo uu la kulmay kala hadlay…